"Hayi Siri" ayikusebenzeli? Zama ezi zisombululo | IPhone iindaba
"Hei Siri" ayikusebenzeli? Zama ezi zisombululo
UPablo Aparicio | | Siri
Ukusuka kwi-iPhone 6s / 6s Plus, kwaye ikwafumaneka kwiPad Pro yangoku, sinokubiza uSiri ngelizwi lethu sisebenzisa lo myalelo "Hei Siri". Oku kunokwenzeka ngenxa yenkqubo ye-M9 co-processor, evumela ukuba isixhobo sihlale siphulaphule ngaphandle kokuba ukuzimela kwaso kuchaphazeleke kuko. Njengawo nawuphi na omnye umsebenzi, "Hey Siri" isenokungasebenzi, kodwa oku kuhlala kulula ukulungisa. Kule nqaku siza kukubonisa Unokwenza ntoni ukuba umsebenzi we "Hey Siri" awuphenduli kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad.
1 Izisombululo ezinokubakho ukuba "Hayi Siri" ayisebenzi
1.1 Ngaba isixhobo sakho siyawuxhasa umsebenzi?
1.2 Sijonga ukuba iyasebenza
1.3 Ngaba siqhagamshelwe kwi-intanethi?
1.4 Senza ukuba imo yokusetyenziswa iphantsi
1.5 Sinyanzela ukuqala kwakhona kwesixhobo
1.6 Sihlengahlengisa kwakhona «Hey Siri»
1.7 Ngaba iyasebenza imakrofoni?
1.8 Nxibelelana neApple
Izisombululo ezinokubakho ukuba "Hayi Siri" ayisebenzi
Okokuqala ndingathanda ukucacisa into ibenye: umsebenzi "Hey Siri" izakusebenza kwi-iPhone ukuba asiyigcinanga. Ndinayo kwisigqubuthelo selaphu elingqingqwa kwaye ayiphenduli ukuba ndinayo ngaphakathi. Kwelinye icala, i-iPad Pro inokuba kwimeko engekho semthethweni kwaye iphendule. Ngale nto ichaziweyo, siyaqhubeka sichaza izizathu zokuba kutheni ungaphenduli.
Ngaba isixhobo sakho siyawuxhasa umsebenzi?
"Hayi Siri" iyakusebenza kuphela ukuba sisebenzisa esinye sezixhobo zilandelayo:
9.7-intshi iPad Pro
Sijonga ukuba iyasebenza
Ngokusengqiqweni, ukuze umsebenzi usebenze, kufanelekile ukuba ungafuneki kwakhona, yona Kufuneka yenziwe isebenze. Ukuyijonga, kufuneka nje siye Useto / Ngokubanzi / iSiri kwaye usebenze, ukuba akunjalo, "Vumela 'Hey Siri'".
Ngaba siqhagamshelwe kwi-intanethi?
Siri ufuna uqhagamshelo ukuze ukwazi ukusebenza. Ukuba asixhunyiwe kwi-intanethi, siya kubona umfanekiso onjengowangaphambili. Ukuba iyasebenza, sidityanisiwe; ukuba kuthatha ixesha elide ukuphendula kuthetha ukuba unxibelelwano luyacotha, kodwa lukhona. Ukuba iyafumaneka, ngokusengqiqweni, kuya kuhlala kungcono ukunxibelelana nenethiwekhi ye-Wi-Fi.
Senza ukuba imo yokusetyenziswa iphantsi
Nangona ingadli mandla maninzi, umsebenzi we "Hey Siri" udla ngaphezulu kunokuba besingakhange sisebenze. Ke, ayizukusebenza ukuba sisebenzise imo yokusetyenziswa esezantsi kuba uSiri uyaqonda ukuba sifuna ukonga amandla. Ukuba siyisebenzisile imo yokonga umbane ngaphandle kokuyidinga, singayikhupha ukuze isebenzise iSiri ngelizwi lethu.
Sinyanzela ukuqala kwakhona kwesixhobo
Ukuba konke oku kungasentla kulungile, inyathelo elilandelayo esinokuzama ngalo kukuqalisa kwakhona i-iPhone okanye i-iPad. Ukuba sijonga ukuba sifuna ukusombulula ukusilela kwesoftware encinci, ndingacebisa Nyanzela ukuqala kwakhona ngokuthe ngqo ukuba iya kuhlala isigcinela ixesha (kwimeko apho ukuqala kwakhona okuqhelekileyo kungasombululanga). Siza kunyanzela ukuqala kwakhona kwe-iPhone yethu okanye i-iPad ngokucinezela nokubamba okuseleyo kwaye siqale amaqhosha ngokudibeneyo de sibone iapile. Gcina ukhumbula ukuba akukho mfuneko yokuba sikhulule amaqhosha de sibone iapile okanye, kungenjalo, siza kuyicima.
Sihlengahlengisa kwakhona «Hey Siri»
Ukuze uSiri aphendule kumyalelo odumileyo, kuya kufuneka senze ubumbeko lwangaphambili. Oluqwalaselo luyimfuneko ukuze libone ilizwi lethu kwaye akukho mntu ngaphandle kwethu onokulisebenzisa. Ichanekileyo, kodwa sele ndiyibonile indlela umzalwana onelizwi elifana nelam anokuyenza ngayo ngaphandle kwengxaki. Kuba setha kwakhona "Hayi Siri" kuqala kuya kufuneka sisebenze umsebenzi oseto. Xa uvula iswitshi okanye uqhobosho kwakhona, kuya kubakho iwizard yoqwalaselo. Kufuneka senze le nto isixelela yona, kodwa ndincoma ukwenza inkqubo xa kungekho ngxolo ingasemva kakhulu okanye ukwamkelwa kungasilela kwixesha elizayo.
Ngaba iyasebenza imakrofoni?
Ngelixa siqwalasela umsebenzi, isixhobo asinakho ukuva into esiyithethayo. Kungenzeka ukuba kuphela lo msebenzi uyasilela, ke siya kujonga ukuba iyasebenza kolunye usetyenziso. Umzekelo, sinokuzama ukuthumela ukurekhodwa nguWhatsApp okanye ukusebenzisa iDictation kuso nasiphi na isicelo esivumela lo msebenzi. Ukuba ayisebenzi, sinokuba nesigqubuthelo esigubungela imakrofoni, ke kungcono sikukhangele ukuba siyasebenza ngaphandle kwesiciko Ukuba awuphenduli, siya kwinqanaba elilandelayo.
Ukuba ngaphandle kwayo yonke into ayisebenzi, njengesiqhelo inyathelo lokugqibela kukunxibelelana Inkxaso yeApple. Ukuba ingxaki sisixhobo sehardware, ndinomdla wokucinga ukuba into engasebenziyo njengoko kufanelekile yiprosesa ye-M9, kodwa yinkonzo yezobuchwephesha ka-Apple osixelelayo. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba ii-iPhone 6s ziye zathengiswa ngo-Septemba wonyaka ophelileyo kwaye i-iPad Pro ikwenzile oko ngoMatshi ophelileyo, zonke izixhobo ezifanelekileyo ziya Iwaranti yonyaka wokuqala, ke kufanelekile ukuba uyisebenzise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Siri » "Hei Siri" ayikusebenzeli? Zama ezi zisombululo
Ayisebenzi kum nge 6s dibanisa ... iyeka ukusebenza ndedwa
Irina Alvarado sitsho
U-Siri wam uhlala ekhubaza kwaye kuya kufuneka ndiyenze kwakhona! Kukutsala, ndenza njani ukuba kuyeke ukwenziwa ukuba kungasebenzi?
Phendula u-Irina Alvarado
Gisella Jara sitsho
Umbuzo, faka i-ios 11 kodwa ungathumeli nge-siri kwi-facebook.
Phendula gisella Jara
USergio Rodriguez sitsho
Mva kwemini, ndine-iPhone 6 kunye ne-SIRI ayindimameli, ndizamile ukususa isiciko kwaye ayisebenzi, endaweni yoko ndizamile nge-wuatssap kwaye ukuba imakrofoni iyasebenza. kunye no-siri ngokubhaliweyo ukuba kuyasebenza.
Ndiyathemba impendulo yakho.
Phendula uSergio Rodriguez
Mva kwemini, ndine-iPhone 6 plus kwaye i-SIRI ayindimameli, ndizamile ukususa isiciko kwaye ayisebenzi, endaweni yoko ndizamile nge-wuatssap kwaye imakrofoni ayisebenzi. kunye nemfihlo ngokubhaliweyo ukuba kuyasebenza.
Ndiyathemba impendulo yakho
Oscar Vásquez sitsho
Njengoninzi lwe-siri kwi-6 kunye ayisebenzi, iyenzeka kwabanye kwaye andikasifumani isisombululo, ndizamile nokubuyisa kodwa akukho nto konke konke, nangona kunjalo imakrofoni iyasebenza kuba ndiyakwazi ukurekhoda, ukufowuna, Ukufowuna ngesandisi-lizwi, kodwa umba uku-Siri kuphela ongamameliyo, NGABA UYA KUBA NGUVE?
Phendula uOscar Vásquez
Yinnelly Isturiz sitsho
Mva kwemini, zonke ii-microphones ziyandisebenzela, kuyacaca ukuba iphambili ndiyisusile ulwelwesi, ndinemicah ekhusela iscreen kuphela kodwa ndiyabona ukuba ilungele iphone yam kuba ayiyigubungeli imakrofoni kodwa ikhamera . Kuya kuba kukuba unento engalunganga. 🙁
Phendula u-Yinnelly Isturiz
molo ndine-iphone 6 kodwa u-siri akasebenzi kum ngelixa isixhobo sitshixiwe, olu khetho sele lusebenzayo kodwa aluphenduli, ndingenza ntoni?
UJoaquin kast sitsho
Kwi-iPhone 6 dibanisa ndingathumela imiyalezo ye-WhatsApp, isithethi, kodwa uSiri akandiva. into ekhohlisayo kukuba iividiyo zekhamera engaphambili akukho sandi.
Phendula Joaquin Kast
Imfihlelo emva kweekona ezijikeleziweyo ze-iOS
I-TaiG ithi ayizukuyeka ukusebenza ukumilisela enye intolongo